Insect Sculptures Kushambadzira - Dhizaini magazini
Kushambadzira Chidimbu chimwe nechimwe chakagadzirwa nemaoko kuti chigadzire zvipenga zvezvipembenene zvakafuridzirwa nemagariro avo uye nechikafu chavanodya. Iyo artwork yakashandiswa sekufona kuita chiitiko kuburikidza neDoom webhusaiti zvakare inongedza zvakananga dzimba zvipuka. Zvinhu zvinoshandiswa pakuvezwa izvi zvakatsveneswa kubva kumajangi, marara marara, mibhedha yenzizi uye misika mikuru. Pakangounganidzwa chipembenene chimwe nechimwe, ivo vaitorwa mifananidzo ndokudzoreredzwa mu photoshop.
Zita rechirongwa : Insect Sculptures, Vagadziri zita : Chris Slabber, Izita remutengi : Chris Slabber.
Kutora mifananidzo uye foto kunyengera
Kushambadzira Chris Slabber Insect Sculptures